Weerar bambaano oo ka dhacay magaalada Karachi • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Weerar bambaano oo ka dhacay magaalada Karachi
Weerar bambaano oo ka dhacay magaalada Karachi
Posted: Khalid Yusuf - January 2, 2013
Weerar bambaano oo shalay gelinkii danbe ka dhacay magaalada Karachi ayey ku dhinteen ugu yaraan 2 qof, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 10 ruux, kadib markii bambaano lagu qarxiyey gaadiid siday taageerayaasha xisbiyada Islaamiga ah.
Weerarkan ayaa lala beegsaday gaadiid u badan basas oo siday taageerayaasha xisbiyada Muttahida Qaumi Movement oo ah xisbiga ugu awooda badan Karachi iyo Xisbiga Tehreek-e-Minhajul Quran – oo uu hogaamiyo Wadaadka Tahir-ul Qadri.
Weerarkan ayaa loo adeegsaday mooto lasoo saaray bambaano oo la dhinac dhigay wadada ay gaadiidku marayeen.
Magaalada Karachi oo ah caasimada ganacsiga ee Pakistaan ayaa waxaa ku dhaqan 18 milyan oo qof, waxaana mar walba ka dhaca weerar u dhaxeeya shiicada iyo Sunnida.
Sidoo kale Kooxda Talibanka ayaa magaaladaasi horey uga fulisay weeraro ay la beegsato gaadiidka ay adeegsadaan ciidamada Maraykanka iyo NATO oo dekkada Karachi kasoo dejista saheydooda u socota ciidamada ka jooga dalka Afghaanistaan.